सिन्डिकेट लादेको सामाखुशी यातायात 'लार्इन' मा अायो - Lokpath Lokpath
२९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०५:३५
सिन्डिकेट लादेको सामाखुशी यातायात ‘लार्इन’ मा अायो
प्रकाशित मिति : २९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०५:३५
काठमाडौँ : सामाखुशी यातायात व्यवसायी समितिले गोंगबुदेखि सिनामंगलसम्म ५० सिटे ठूला बस सञ्चालन गर्ने भएको छ । यो समिति सिन्डिकेट लादेर यात्रुलार्इ सास्ती दिने काम गरेपछि सरकारी कारबाहीका कारण अालोचित छ ।
७ करोड रूपैयाँ लगानीमा समितिले १७ वटा बस सञ्चालन गर्न लागेको हो । असार पहिलो साता १० वटा र त्यसपछि क्रमश : ७ वटा बस सञ्चालन गर्ने समितिले जनाएको छ । भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको दिगो सार्वजनिक यातायात सेवामार्फत यो समितिले ठूला बस सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
ठूला बस सञ्चालन गर्न लागेको यो समिति अब कम्पनीमा दर्ता हुनेछ । कम्पनीले नयाँ बसपार्क हुँदै गोंगबु, गल्कोपाखा, लैनचाैर, जमल, कमलपोखरी, मैतीदेवी हुँदै सिनामंगलसम्मको खण्डमा ठूला बसमार्फत यात्रुलार्इ सेवा दिने दाबी गरेको छ ।
हाल सामाखुशी क्षेत्रमा चल्ने मार्इक्रोबसलार्इ अन्यत्र स्थानान्तरण गरि सोहि रूटमा नयाँ बस सञ्चालन गरिने कम्पनीले जनाएको छ । हाल यो रूटमा २६ वटा मार्इक्रोबस सञ्चालनमा छन् । यो रूटमा ठूला बस सञ्चालन गर्न एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले १ करोड ९० लाख रूपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ ।
काठमाडौं । युक्रेनमा प्रदर्शनकारीहरूले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट प्रभावित चीनबाट उद्धार गरिएका मानिसहरू चढेका सवारीसाधनमा
निन्द्रा लागेन ? यी उपाय पढेपछि भन्नुहुनेछ, ‘गुड नाईट’ (कुन उमेरलाई कति निन्द्रा)
काठमाडौं – तपाई कति घण्टा सुत्नुहुन्छ ? मानिसको उमेर, शारीरिक अवस्था, मानसिक स्थिती
१० नेपालीलाई वुहानमै छाडेर नेपाल उड्यो विमान
काठमाडौँ । चीनको बुहानमा रहेका १७५ नेपालीलाई लिएर नेपाल एयरलाइन्सको विमान स्वदेशका लागि
चीनको वुहानबाट नेपाली ल्याउन उड्यो विमान, यसरी ल्याईनेछ भोली बिहानै
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको इपिसेन्टर मानिएको चीनको हुवेई प्रान्तबाट नेपालीहरुलाई